Umkhiqizo wochungechunge lwe-HUAJING synthetic mica usebenzisa isimiso sokuncibilika kwe-crystallization ekushiseni okuphezulu. Ngokuya ngamakhemikhali wemvelo nokwakheka kwangaphakathi, okukhiqizwa ngemuva kokushisa kwe-electrolysis kanye nokuncibilika ekushiseni okuphezulu, ukupholisa kanye ne-crystallization, khona-ke i-mica yokwenziwa ingatholwa.
Irabha Ibanga Mica Powder
Into Umbala Mhlophe (Lab) Usayizi wezinhlayiyana D90 (μm) Izinto zokuvala umoya Ukuhlanzeka (%) Izinto Magnetic (PPM) Imishini iture%） I-LOI (650 ℃) PH Qaphela
I-HCD-200 Mhlophe ＞ 96 60 Okuphakeme kakhulu .9 99.9 ＜ 50 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 Ukusebenza Kokuvinjelwa Okuphezulu
I-HCD-400 Mhlophe ＞ 96 48 Okuphakeme kakhulu .9 99.9 ＜ 50 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6
HCW-200 Okukhanyayo Okumhlophe ＞ 98 65 Okuphakeme kakhulu .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 Umkhiqizo Wokuvikela Okusezingeni Eliphezulu
HCW-400 Okukhanyayo Okumhlophe ＞ 98 50 Okuphakeme kakhulu .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6
HCW-600 Okukhanyayo Okumhlophe ＞ 98 25 Okuphakeme kakhulu .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6
HCW-1250 Okukhanyayo Okumhlophe ＞ 98 15 Okuphakeme kakhulu .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6
Ekusetshenzisweni kwensimu yenjoloba, i-mica isebenzisa ngokunenzuzo ukwakheka okubili kwe-mica uqobo, okunikeza umphumela omuhle kakhulu wokuqinisa imikhiqizo yenjoloba. Izakhiwo zemvelo ezinhle kakhulu zokwehlukanisa, zinikeza ukusebenza okuhle kokufakwa kagesi kwerabha ephezulu yokuhlukanisa. Usebenzisa inzuzo yesithiyo se-mica sheet, ikhulisa ukuqina komoya; Ingafaka ingxenye ye-silica, enikeza izixazululo ezomnotho zezinto zokwenziwa zenjoloba; Ukumelana okuhle kwe-shear nokumelana nokuhuzuka, kuthuthukisa ukumelana nokuhuzuka okuqinile kwenjoloba emelana nokuhuzuka okuphezulu. Smooth futhi omuhle kakhulu interface umphumela inikeza ukuhlukaniswa izici ezinhle isikhunta.
Umehluko Omkhulu Wempahla Phakathi Kokwenziwa Kwe-Mica Nemicrosoft Yemvelo
1. I-mica yokwenziwa ayiqukethe i-hydroxyl (OH) -, futhi ukumelana kwayo nezinga lokushisa eliphakeme nokuqina kokushisa kushisa kune-mica yemvelo, futhi izinga lokushisa kwensizakalo cishe liyi-1100 ℃. I-fluorophlogopite ibola kancane ngaphezu kwe-1200 ℃, kanti izinga lokushisa elincibilikayo le-fluorophlogopite cishe liyi-1375 ± 5 ℃. Izinga lokushisa eliphakeme kakhulu le-mica yemvelo: i-Muscovite 550 ℃; I-Muscovite 800 ℃ (i-Muscovite yemvelo iqala ukubola ku-450 ℃ futhi icishe ibe ngu-900 ℃ ngokuphelele; I-Muscovite iqala ukubola ngo-750 ℃, ngokuncipha okukhulu kwesisindo ngaphezu kuka-900 ℃). Izinhlobo ze-Mica zingahlukaniswa ngokushisa okuphezulu noma ngokuhlaziya okushisayo kokushisa.
2. I-mica yokwenziwa inokungcola okuncane okumsulwa nokubonakala okuhle. Ngaphandle kokuthi ubulukhuni bayo buphakeme kancane kunobo be-mica yemvelo, ezinye izinto ezenziwa ngomshini, ukufakwa kukagesi kanye nezindawo zokuphuma kwe-vacuum ye-mica yokwenziwa ingcono kunaleyo ye-mica yemvelo. I-mica yokwenziwa ingamiselela ngokuphelele i-mica yemvelo futhi uhlobo olusha lwezinto ezivikela ukushisa eziphakeme kakhulu ezinezakhiwo ezikhethekile nezinhle kakhulu.
Langaphambilini I-mica powder yemvelo